12 Sano kaddib xaggee buu yaallaa Meydka Saddaam Xuseen? - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
30kii December Sanadkii 2006dii waxaa Magaalada Baqdaad ee Xarunta Dalka Ciraaq lagu del delay Madaxweyinihii hore ee dalkaas Saddaam Xuseen,kaas oo dalka Ciraaq xukumayay muddo rubuc qarni ah.
Markii la del delay Saddaam Xuseen Sheekha Qabiilka uu ka dhashay ee Albu Nasser, Sheekh Manaaf Cali Al Nidaa ayaa codsaday in Meydka Saddaam lagu wareejiyo.
Waxaana Warqad ka soo baxday Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush lagu amray in marka la dilo kaddib si deg deg ah loogu wareejiyo ehelkiisa oo deggan Tuulada Al Awjah ee hoostagta Degmada Tikriit,halkaas ayaana lagu aasay.
Sanado badan kaddib waxaa ay hadda dood ka taagan tahay Meydkii Saddaam malaga bixiyay Qabrigii Al Awjah mise wali waa uu ku jiraa?
Saddaam Xuseen oo 69 jir ahaa ayaa horay uga dar daarmay in Tuuladaas lagu aaso marka uu geeriyoodo sidii ayaana loo yeelay.
Qabrigiisa waxaa sanad kasta booqda Taageerayaashiisii,waxaa hadda la isu diyaarinayaa booqashada Qabriga oo sanadkiiba mar la booqdo waxaana ay ku aaddan tahay 28ka Bishan April, oo ku beegan dhalashadiisii.
Dadka booqanaya maanta waxaa ay u baahanyihiin oggolaansho degaanka ah,Sheekhii Qabiilka Saddaam ee Sheekh Nidaa,waxaa uu u baxsaday ismaamulka Kurdistan,halkaas oo uu hadda ku noolyahay,waxaana maamulka ka taliya Tikriit ay dadka siinayaan oggolaansho lagu booqdo qabriga.
Dood badan ayaase ka dhalatay in uu Qabriga wali ku jiro iyo inkale waxaana arrintan ay soo baxday kaddib markii mid ka mid ah ilaaladii gaarka ahayd ee Saddaam Xuseen uu sheegay in Meydka Saddaam ay Gabadhiisa Halaa u qaadatay dalka Jordan iyada oo ku qaadatay Diyaarad gaar ah.
Mas’uuliyiinta qaar ee Tikriit ayaa sheegay in Qabriga Saddaam uu wali halkiisii yahay kuna jiro,waxaana ay beeniyeen in la bixiyay,hase ahaatee Qoyska Saddaam ayaa isku dayaya in Qabriga Saddaam uu ahaado mid qarsan oo sidan ay dood uga taagnaato.
Laakiin Dadka deggan Caasimadda Baqdaad maba rumeysna in Saddaam dhintay,dadka aragtidaas qaba waxaa ka mid ah Abuu Samiir oo ka mid ah Dadka deggan Baqdaad,waxaa uu sheegayaa in uusan rumeysneyn in la dilay Saddaam walina noolyahay.